VaMthuli Ncube Vokurudzirwa Kuwedzerwa Mari kuMauto Ane Vamwe Vave Kuba Vachishandisa Pfuti
Dzimwe nhengo dzeZimbabwe National Army pazuva reMagamba.
Gurukota rinoona nezvemari Muzvinafundo Mthuli Ncube mangwana vari kutarisirwa kuparura hurongwa hwavo hwemafambisirwo emari hwepakati pegore kana kuti Mid-Year Fiscal Policy.
VaNcube vari kuparura hurongwa uhu apo zvinhu zviri kunzi hazvina kumira zvakanaka kuvashandi vehurumende zvave kutyirwa kuti zvinogona kupa kuti nyika isagadzikane sezvo mamwe mauto nemapurisa ave kuita zvekuba akapakatira pfuti.
Mhosva dzakaparwa nevechiuto dzinosanganisira vamwe vari kuuto repamusoro soro munyika reOne Commando uye vamwe vanochengetedza mutungamiri wenyika vePresidential Guard.
Bepanhau repadandemutande reNew Zimbabwe rinoti vakuru vemauto vave kufamba kumakamba ose vachitaura nemauto nezvenyaya iyi sezvo vavhundutswa nekukwira kwoita huwandu hwemauto ari kupomerwa mhosva dzekubira vanamuzvinabhizimisi kunyanya.
Masangano anomirira vashandi vehurumende nenyanzvi munyaya dzezvehupfumi vari kukurudzira VaNcube kuti vagadzirise nyaya dzemihoro yevashandi avo vawedzerwa mihoro mwedzi uno nezvikamu makumi mashanu kubva muzana asi mari yacho ichinzi ishoma zvikuru kuti vakwanise kuti vararame sezvo zvinhu zviri kudhura.
Tatumira mubvunzo kugurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, Amai Oppah Muchinguri Kashiri asi vange vasati vapindura.
Asi Amai Muchinguri Kashiri vanogara vachichema chema kudare reparamende kuti mari yebhajeti yavanopihwa ishoma zvikuru kuita mabasa avanotarisirwa kuita.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute, Doctor Pedzisayi Ruhanya, vati hurumende inofanira kuwedzera vashandi mari asi vakati izvi hazvirevi hazvo kuti mauto anofanira kuba achishandisa pfuti nehunyanzvi hwavo.